Shacabka gobolka Gedo oo ka hadlay ciidamada Itoobiya ee yimid Gobolkaas – SBC
Shacabka gobolka Gedo oo ka hadlay ciidamada Itoobiya ee yimid Gobolkaas
Shacabka gobolka Gedo ayaa siweyn uga hadlay ciidamo itoobiyaan ah oo soo dhoobtay qeybo ka mid ah gobolka kuwaasi oo aan la ogeen ujeedada ay u yimaadeen gobolka .
Waxay sheegeen dadka gobolka in ay siweyn uga walaacsanyihiin xaaladaha miliyeri ee ka jira gobolka iyagoona cabsi xoogleh ka muujiyay dhibaatooyinka ka dhalankarta ciidamada Itoobiya iyo kuwa kale ee dalka ku sugan hadii ay u soo gudbaan deegaanada qaar ee gobolka ee ay ku sugan yihiin xarakada Mujaahidiinta Alshabaab oo dagaal kula jirta .
Waxay sheegeen in ay siweyn ugu baqabqabaan dagaalo ka dhaca gobolka oo saameyn ku yeesha maadaama ay yihiin dadka ku dhaqan deegaanada ay doonayaan in ay xoog ku galaan ciidamada DKMG ah iyo kuwa garbinaya ee Itoobiya iyo Kenya.
Qaar ka mid ah dadka degmada Baardheere ee gobolkaasi gedo ayaa u sheegay xafiiska SBC ee halkaasi in siweyn ay uga xunyihiin xiisadahan soo cusboonaaday iyo soo gelitaanka ciidamada Itoobiya qeybo ka mid ah gobolka Gedo sida Degmada Luuq ee gobolkaasi oo ay maalmihii ugu dambeysay ku soo qulqulayeen.
Sidoo kale xarakada Alshabaab ee ka arimiso qeybo badan oo ka tirsan gobolka Gedo iyo Koonfurta Soomaaliya ayaa iyagu ka hadlay dhaq dhaqaaqyada ciidamada Itoobiya ay ka wadaan gobolka iyagoona sheegay in ay ku soo duuleen gobolka ayna la galayan dagaal .
SBC International Gedo